■ UkuSebenza okuPhezulu kweTekhnoloji yokuDlulisa ubushushu.
■ amandla Strong anti-umhlwa, ubomi inkonzo ixesha elide.
■ Ukonga umbane kunye nezixhobo zotshintshiselwano ngobushushu
PUmgaqo wokuSebenza: Inkqubo eshushu yamanzi ukusuka kuMthwalo / inkqubo / inkqubo ingena kwifayile ye- inkqubo yokuhambisa amanzi Phezulu kwinqaba yokupholisa apho ihanjiswa khona ngaphezulu kokusebenza ngokukuko igcwalisa okanye imithombo yeendaba yokuhambisa ubushushu. Inkqubo ye-abalandeli be-axial, ebekwe phezulu kweyunithi, yenza umoya ukusuka kwicala leyunithi ngaphezulu kokugcwalisa. Ukuzaliswa kuphucula ukuhamba komoya, kwandisa indawo yokuhambisa ubushushu phakathi kwenkqubo yokuhambisa amanzi kunye nomoya, kwaye kuphucula ukuhanjiswa kobushushu bokuhambisa.
Inlet Louvers ikhusela inqaba kumasuntswana angaphandle atsalelwa kule yunithi. Xa inkqubo eshushu yamanzi inxibelelana nomoya obandayo, umoya uyatshisa kwaye inxenye yenkqubo yamanzi iyaphuphuma esusa ubushushu emanzini aseleyo. Amanzi abandayo awela kwisitya esingezantsi emva koko abuyele kwinkqubo / kumthwalo. Kushushu umoya uphuma kwinqaba usuka phezulu, phambi kokuba udlule kwizikhuhli ezikhukulisayo, ethi ibambe amathontsi amanzi asemoyeni ayibuyisele kwisitya esingezantsi.
Egqithileyo I-Evaporative Condenser-Ukuhamba koMnqamlezo
Okulandelayo: Kupholisa umoya
Unyango lwaManzi oluPholileyo
Uyilo olwenziweyo lokupholisa iNqaba
Inkqubo ye-AIO yefriji ene-Conde evaporative ...